मन्त्रीज्यू,हिलोमै फोटो खिचाउन पर्ने भए जोरपाटी गए हुन्न ? [फोटोफिचर]
दुई दिन अघि (असार १५ ) धान दिवसको अवसर पारेर हिलो खेतमा कपडा सुर्केर धेरैले सेल्फी खिचें ।
मन्त्री, नेता, कलाकारदेखि सर्वसाधारण सेल्फि र फोटो खिच्न हिलोमा पसे ।
कसैले मुख चुच्चो बनाए, कसैले शरीरमा हिलो दले । जे होस् हिलोमा रमाइलो गरे ।
तर, काठमाडौंका धेरै सर्वसाधरण हिलो देखि आजित छन् । उनीहरुलाई त्यो हिलो देख्दा सेल्फि खिच्ने रहर छैन ।
हिलो देख्दा नेतालाई गाली गर्नु र कपडा माथि सुर्केर हिड्नुको उनीहरुसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । लाग्छ देशमा सरकार छैन, नेता छैनन् । भए त केही न केही गर्थे ।
देशका मुख्य शहरी क्षेत्रको अवस्था यस्तै छ ।
राजधानी काठमाडौंको अवस्था त झन् दर्दनाक छ ।
राजधानीको चावहिल, जोरपाटी, साँखु सडकमा हिड्ने सर्वसाधरणले एक दुई जोर कपडा झोलामा राखेर हिड्नु पर्ने बाध्यता छ ।
पाँच मिनेटमा पुग्ने बाटोमा हिँड्न सक्ने अवस्था छैन जसका कारण गाडी चढ्नुपर्ने अवस्था छ । सडक आसपासका पसलहरुले मासिक आधालाख भन्दा बढी भाडा तिर्छन् । हिलोका कारण व्यापार छैन । न त राज्यले हेर्छ न घरभेटीले ।
त्यस्तै अवस्था छ कलंकी नागढुंगा सडक खण्डको पनि । दर्जन बढी ढेकेदारले सडक बनाउने ठेक्का पाएको भएपनि काम सकिनुपर्ने अवधिमा आधा काम पनि भएको छैन ।
घाम लाग्दा धूलो त उडेकै छ तर पानी परेसँगै हिलाम्मे सडक हेर्दा बसाइँ सरुसरु लाग्ने स्थानीय बताउँछन् । तर कहाँ जाने ? राजधानीको कुनै ठाउँमात्र पनि वाह १ भन्ने छैन । राज्य कहिले गम्भीर र जिम्मेवार बन्ला ?